786 & 969 | NEW BURMA MEDIA
786 & 969
March 29, 2013 — newburma
အခုမြန်မာပြည်မှာ (၉၆၉)ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ မြင့်မြတ်သော ဂုဏ်တော်သုံးပါးကို အသုံးပြုကာ အဲဒီမြင့်မြတ်တဲ့ ဂုဏ်တော်တွေနှင့် လုံးလုံးလျားလျား ဆန့်ကျင်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ရေး တစ်လွဲလုပ်နေတာ စိတ်မသက်မသာ ကြားသိနေရပါတယ်။……
ဘုရားဂုဏ်တော် (၉)ပါး၊ တရားဂုဏ်တော်(၆)ပါး၊ သံဃာဂုဏ်တော်(၉)ပါးသည် လူသားတိုင်း လေးစားကြည်ညိုထိုက်တဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဂုဏ်တော်တွေက လူသားအားလုံးအတွက် မေတ္တာ၊ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပက္ခာဆိုတဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ ဂုဏ်တော်တွေဖြစ်တယ်လို့ သိထားပါတယ်။
၉၆၉ တံဆိပ်က အရုပ်က လုံးလုံး စိတ်ညစ်စရာပါ။ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တိရစ္ဆာန်ကိုအမြင့်မှာထား ကိုးကွယ်တာမရှိဘူး… ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဖျက်စီးကြပါနှင့်။ ကုလား ၇၈၆ နောက်က ၉၆၉ မလုပ်ကြပါနှင့်။ အရဟံကို ပိုသဘောကျသင့်ပါတယ်။ ၉၆၉ ထက် အရဟံ ကိုအစဉ်တစိုက်သုံးခဲ့ကြတာပါ ဂဏန်းက သူတို့တွေသုံးသလို လိုက်လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ် ….. မနေ့တနေ့ကမှထွင်တဲ့ ၉၆၉ ကို လက်မခံတာနဲ့ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး လည်း ပြောနေကြပါတယ်။…. မူဆလင်တွေက ၇၈၆ မလို့ ငါတို့ က သူတို့ နဲ့ အပြိုင် ၉၆၉ လိုက်လုပ်ဒါလား တွေးတက်ရင် ရှက်ဖို့ ကောင်းပါတယ် ။ ၉၆၉ က ဂုဏ်တော်ကိုးပါးကို ရည်ညွန်းနေတယ်လို့ ဦးနှောက်မရှိတဲ့လူတွေပြောတယ် ..ဒါကတရားသစ်တီတွင်မှု့ ပါ အရင်ဗုဒွဘာသာဆိုင်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ၊ အရဟံ အစရှိဒါတွေထက် ဒီ ၉၆၉ ကပိုပြီး မြက်တယ်လို့ ထင်နေမှ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဂိုဏ်ကွဲဖို့ ဖြစ်လာပြီး ……
Posted in Religious. LeaveaComment »
« မြောက်ပိုင်းခြိ်မ်းခြောက်မှု တောင်ကိုရီးယားလူထု စစ်ရေးဖြင့် တုန့်ပြန်လို
ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်တော်ကိုးပါးဆိုတာ အဓိကနားလည်းထားရမှာပါ။ ကိန်းဂဏန်း ၉နဲ့လဲပြီး မှတ်သားဖို့ မသင့်ပါဘူး။ တကယ့် ဘုရားဂုဏ်တော်တွေက ဆုံးစမရှိပါဘူး။ »